यस्तो पो प्रेम ! जसले प्रेम पाउन जमिनदारी त्यागे - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
धनाढ्य जमिनदारको छोरा सत्यनारायण एक मुस्लिम युवती रसुलियाको प्रेममा परे। ०३१–३२ सालतिर नेपालमा उनको प्रेम दुस्साहस थियो। तर हैसियत, जात, धर्म सबै पर्खाल नाघेर उनको प्रेमले विद्रोह गर्‍यो।
पटक पटक ताकेता गरियो तर सुरुमा उनले आफ्नो प्रेम इतिहास खोल्न चाहेनन्। आफ्नै छोराको अघि प्रेममय दिनहरूको खुला बयान गर्न धक थियो। सायद छोराले कुरा बुझे, बाहिरिए।
४०–४२ वर्षअघि एउटा प्रेमकथा यसरी अंकुराएको थियो
रसुलियाले सत्यनारायणको भाव बुझ्न थालिन्। गरिब परिवारमा जन्मिएकी रसुलियासँग जमिनदारको छोरालाई मनमा राख्ने हैसियत थिएन। सत्यनारायण भने उनको मायामा डुबिसकेका थिए। तर, डर थियो परिवारको र समाजको। एउटा कट्टर हिन्दू परिवार, अर्को कट्टर मुस्लिम परिवार। एउटा फुसको झुपडीबाट तारा गन्ने परिवार। अर्को भव्य बंगलाबाट जूनताराको स्वाद लिने परिवार १
रसुलियाले सत्यनारायणको प्रेम स्वीकार गरिसकेकी थिइन्। लुकीलुकी, भागीभागी भेट्न थाले उनीहरू। परालको कुन्युपछाडि, लहरी घारी, खेतको ढिस्को उनीहरूका ‘डेटिङ स्पट’ थिए। मानिसहरूले झनै कुरा काट्न थाले। हृदयनारायणको घरमा तनावका तलाहरू थपिए। लोकलाजले पिरोल्न थाल्यो हृदयनारायणलाई। छोरालाई पटकपटक सम्झाउँथे। तर, प्रेमी सत्यनारायणको एउटै रटान थियो, एउटै धुन थियो ‘म रसुलियालाई माया गर्छु। उसैसँग जीवन बिताउँछु।’
सत्यनारायणको परिवारले अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्ने योजना बनायो। खान्दानका सबै सदस्यलाई भेला गरेर उनलाई प्रश्न गरियो ‘ल भन् भृगु ! जमिनदारको जीवन, दौलत, बुबाआमा, दाजुभाइ, सानको जिन्दगी रोज्ने कि त्यो मुसलमान गरिब र अनपढ केटी ? ’
सत्यनारायणका लागि रसुलियाको घर माटोले टालेको खरको झुपडी थिएन, प्रेमको जन्नत ९स्वर्ग० थियो। उनी सरासर त्यही जन्नत पुगे, अनि तुरुन्तै मस्जिद गए। सेतो टोपी लगाए। नवाज पढ्न थाले। गाउँभरि हल्ला फैलियो, ‘जमिनदारको छोरा रसुलियाका लागि मुसलमान बन्यो।’ अब उनलाई गाउँलेले भन्न थाले ‘हालमियाँ’ (भर्खरै मुस्लिम भएको)।
यसरी सत्यनारायणले रसुलियाको खातिर आमा त्यागे, बा त्यागे। दौलत त्यागे र धर्म त्यागे। यहाँसम्म कि आफ्नो जातै त्यागे। यसरी सत्यनारायण दास यादवबाट उनी मोहम्मद अल्लाउद्दिन बने।
जेठा छोरा जन्मिँदाको घटना उनको स्मृतिमा ताजा छ। रसुलिया सुत्केरी हुँदा उनले पोषिलो खानेकुरा खुवाउन सकेनन्। बनीबुतो गरेर ल्याएको खानेकुराले सुत्केरीलाई के खुराक पुगोस् । त्यसैबेला साँझपख झुपडीबाहिर एक जना छिमेकी आएर उनलाई बोलाउन थालिन्। बाहिर निस्कनेबित्तिकै ती महिलाले पोल्टामा लुकाएर ल्याएको एक पोका चामल सत्यनारायणको हातमा थमाउँदै भनिन्, ‘तपाईंको आमाले रसुलियाका लागि भनेर लुकाएर पठाउनुभएको।’
आजभोलि रसुलियाको याद बोकेर बेस्सरी चल्छ चिसो सिरेटो। रसुलियाको छाया बोकेर एकलास डगरमा त्यसै घुमिरहन्छ भुमरी। किनकि, रसुलिया ९ वर्षअघि नै गइसकेकी छन्, ताराहरूको देशमा। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कोशी बाँध अग्ल्याउन भारतको भित्रभित्रै दवाव
साउन ३१, काठमाडौं । भारत सरकाले यसअघि सर्वेक्षण भएअनुसार नै कोशी उच्च बाँध बनाउन दवाव दिएको भए पनि त्यसलाई […]
कैलालीलगायतका जिल्लामा जनजीवन सामान्य बन्दै
भदौ ३ । धनगढी, विभिन्न पक्षले गरिरहेको बन्द र प्रदर्शनका कार्यक्रम खुकुलो देखिन थालेपछि कैलालीलगायतका […]
प्रभु यसरी बन्यो निजी क्षेत्रकै ठूलो बैंक
काठमाडौं, प्रभु बैंक मुलुकको निजी क्षेत्रकै ठूलो बैंक बन्नपुगेको छ । ग्राण्ड बैंकसँग मर्ज भई एकीकृत कारोबार […]
लमजुङमा सात दलले चुनाव चिह्न पाए
बेसीसहर । लमजुङमा सात राजनीतिक दलले मात्र आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन […]
रत्नपार्कको पुनःनिर्माणपछि अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारणको संख्या बढेको हुँदा आम्दानी दोब्बर भएको छ […]